ISONDO LEMFUNDO YEZESONDO 2 IBUYILE KWINETFLIX NGELOT SUSPENSE, PLOT, NEW CAST, SPOILER ESAZIWAYO - IINKQUBO ZETV
Ngaba anonwabanga nonke ngokubuya kolunye uthotho olubukelwe kakhulu kwiNetflix? Ixesha lokufunda ngesondo 1
Ngaba anonwabanga nonke ngokubuya kolunye uthotho olubukelwe kakhulu kwiNetflix? Inkqubo ye- Imfundo yezesondo Ixesha le-1 eliqalelwe ngoJanuwari 11, 2019, laqokelela inani elingaqhelekanga le-fanbase. Ixesha lokuqala laba yimpumelelo enkulu kwiNetflix enabantu abakwi-40 yezigidi abasasaza kwihlabathi liphela. Kwaye ngoku inqanaba lisetelwe ixesha lesibini ukonwabisa sonke kwakhona!
Umdali uLaurie Nunn uphelise ixesha lokuqala ngenqaku elivulekileyo, eshiya bonke ababukeli benomdla omkhulu. Ewe, ngoku lixesha layo lokucacisa yonke imibuzo onayo engqondweni ngokuphela kwexesha lokuqala.
Isondo leMfundo yezeSondo Ixesha lesi-2: Liza kubakho nini emoyeni?
Ke, ukulinda kuphelile ngoku; zilungiselele ukwamkela ulutsha lwaseMoordale High- Otis, Maeve, kunye no-Eric endlwini yakho kulo nyaka mtsha. Ixesha lesibini le Imfundo yezesondo izakubuya ngoJanuwari 17 2020. Ngapha koko, izakuba neziqendu ezitsha ezisibhozo kule ndawo.
Ukudubula ixesha lesibini laqala ekuqaleni kuka-Meyi 2019. Abadlali kunye nabasebenzi basebenza nzima ukuyenza ibengcono kunexesha lokuqala, njengoko bekuxelwe ngenqwelwana kunye nemifanekiso yokuqala yokujonga.
Ixesha lokufundisa ngesondo 2: Ngoobani bonke ababuyayo?
INetflix inayo iqinisekisile ukuba zonke izikhokelo ziya kubuya kumdlalo, kunye no-Asa Butterfield njengo-Otis. Kwakhona kubandakanya, uAnderson njengoJean, uEmma Mackey njengoMaeve, uGatva njengoEric, uAimee-Lou iinkuni njengoAimee, uConnor Swindells njengoAdam noKedar Williams-Stirling njengoJackson.
Ubuso obutsha obongezwe kulo mboniso nguChinenye Ezeudu njengoViv. Uza kudlala indima yomfundi okrelekrele kakhulu kwaye unetalente ekwanobuchule kwizifundo. Omnye nguSami Outalbali. Uza kudlala indawo yomfundi ongumFrentshi ogama linguRahim. Ekugqibeleni, nguGeorge Robinson, oza kudlala indima ye-Issac.
Ixesha lokufundisa ngesondo 2: Kuza kwenzeka ntoni? (abonakalisi)
Ngexesha lesibini, u-Otis ufumanisa iminqweno yakhe yesini kwaye uqhubeka nentombi yakhe, u-Ola. Okwangoku, kuya kufuneka ajongane nobudlelwane bakhe obukhohlakeleyo kunye noMaeve. Kwaye abantwana abatsha beza edolophini.
Ubudlelwane bobuhlobo bukaMaeve noAimee buba namandla ngakumbi. ULily ufumana umhlobo omtsha e-Ola. Uyeka kwimizamo yakhe yokwabelana ngesondo kwaye uthathe isigqibo sokugxila kwiitalente zakhe zobuchule. UMaeve uyaluqonda uthando lwakhe ngo-Otis kodwa akanasibindi ngokwaneleyo sokuyivuma kuye. Emva koko ufumanisa u-Otis etshixa imilebe kunye no-Ola kwaye uyaphazamiseka.
Zola ke kwaye ulinde ukufika kwexesha elivuyisayo. Kulabo abangakhange babukele ixesha elinye leMfundo yezeSondo njengangoku. Bukela ngoku! Ukuze ungaphoswa nayintoni na.
Eyona bhanyabhanya ye-anime yango-2016
uhlobo lwesibindi netflix
igazi kunye nexesha lamanzi 2 umhla wokukhutshwa